HomeAqoonta SariirtaU Gaar Ah Ragga: Waxyaabaha Ugu La Yaabka Badan Ee Ragga Ku Soo Jiida Dumarka
Waxa jirta arimo la yaab leh oo oo ay Raggu ku jeclaadaan Dumarka lagana yaabo in aad si weyn ugu qaadan waydo waxana aan halkan ku soo bandhigi doonaa 4 arin oo ay Raggu ku Jeclaadaan Dumarka ama ku soo jiida dumarka.
1.Muuqaalka Aan Dhisnayn:
Dumarku waxa ay mar walb jecelyihiin in ay noqdaan kuwo dhisan oo qurux badan marka ay gacaliyeheeda la joogto ama la kulmayso waliba xidhaan dharkooda ugu qurxda badan laakiin xaqiiqada ayaa ah In ay Raggu jecelyihiin in ay Arkaan quruxda dabiiciga ah ee gabadha uu jecelyahay tusaale ahaan in ay Arkan gabadha marka ay hurdo ka soo toosto ee aanay labisan ama is quruxin.
Ma jirto cid macnayn karta ama ogaan karta sababta la yaabka leh ee ay Ragga qaar ku jecelyihiin in ay gabadha ku arkaan iyada oo xidhan murayada indhaha sida muraayada wax lagu Akhristo ama lagu shaqeeyo.
Kama Hadlayno Cabsida argagaxa leh laakiin Cabsida fal celiska dumarka ee ka badbadiska ah laakiin waxa aan ka hadlaynaa xaaladaha cabsida qaarkood sida Naxdinta ama ka cabsida meelaha dhaadheer iyo wixii la mid ah.
4.Marka Ay Gabadhu Marsanayso Waxyaabaha ay isku qurxinayo:
Ninku wuxuu ku raaxeysanayaa daawashada gabadha uu jecelyahay oo marsanaysa waxyaabaha la isku qurxiyo waana arin si weyn ugu jiidata Dumarka
9 Sabab Oo Ka Dambaysa In Ay Gabadh Walba Raadiso Waliba Doonto In Ay Nolosha La Wadaagto Nin Kaftan Badan.
10 Khalad Oo Ay Galaan Dadka Guurkoodu Cusubyahay, Halisna Ugu Jira In Uu Guurkoodu Bur-Buro, Iska Ilaali Khaladkaas